Madaxweyne Erdogan oo soo saaray fariin ku socota dalal ay ku jirto Somaliya | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Madaxweyne Erdogan oo soo saaray fariin ku socota dalal ay ku jirto...
Madaxweyne Erdogan oo soo saaray fariin ku socota dalal ay ku jirto Somaliya
Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan ayaa soo saaray farriin ku socota dalal dhowr ah oo ay ku jirto Soomaaliya, kuwaasi oo taageero u muujiyay Turkiga, kadib dhul-gariirkii xooganaa ee uu ku dhuftay Magaalada Izmir ee dalkaas.
Ugu yaraan 26 qof ayaa ku dhimatay 804 kalena waa ay ku dhaawacmeen dhul gariir xoogan oo cabirkiisu yahay 6.6 kaas oo gelinkii dambe ee jimcaha ka dhacay Magaalada Izmir ee dalka Turkiga.
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo qoraal soo saaray ayuu ugu mahadceliyay dhammaan dalalka Caalamka ee saaxibada dhow la’ ah Turkiga, kuwaasi oo uu tilmaamay inay u soo direen farriimo ku aadan taageere la siinayo dowladdiisa.
Farriinta uu soo saaray Madaxweynaha Turkiga ayuu ugu mahadceliyay 66 dal oo ay ku jiro Somalia, xili Madaxda dalalkaas ay sheegeen inay gurmad u diri doonaan Turkiga, si gargaar loogu fidiyo dadkii waxyeelada lasoo gaartay dhul gariirkii Khasaaraha geystay.
Dhulgraiirka ayaa ahaa mid qoto dheer oo gaaraya 16.54 KM (10 mayl), Dhulgariirka ayaa sidoo kale ruxay xeebta badda Aegean Sea ee u dhexeysa Turkiga iyo Greece-ga sida ay sheegtay hay’adda maareynta musiibooyinka dalka Turkiga ee loo soo gaabiyo (AFAD).